Gazety "Potato System" - magazine "Potato System"
Tena Label magazine "Potato System"
Label: magazine "Potato System"
Ry mpamaky malala! Fotoana izao hanaovana veloma ny taona 2021. Hafa izany ary nitondra fanamby maro, saingy ankehitriny ...
Attention! Tolotra "mafana"!
Tsy misy afa-tsy pejy efatra maimaim-poana sisa ho an'ny fampahalalana momba ny dokam-barotra amin'ny laharana fahefatra (farany amin'ny 2021) amin'ny gazetiboky Potato System. Manasa...
Ny nomerao fahefatra amin'ny magazine "Potato System" dia eo am-panomanana ny famoahana azy
Ry mpiara-miasa sy mpiara-miasa malala! Ny biraon'ny famoahana amin'ny gazety Potato System dia miasa am-pahavitrihana amin'ny fanomanana ny famoahana ny nomerao manaraka amin'ny famoahana (No. 4, 2021). ...
Antony dimy hametrahana fampiharana finday ho an'ny magazine Potato System
Te-hanaraka ny vaovao farany momba ny indostria ianao, liana amin'ny hevitry ny manam-pahaizana, manan-danja ny tolo-kevitr'ireo matihanina. Ao amin'ny fampiharana no amoahanay ...
Ny nomerao fahatelo amin'ny magazine "Potato System" dia eo am-panomanana ny famoahana azy
Amin'ny folo andro voalohany amin'ny volana septambra, havoaka ny nomerao amin'ny fararano (Gazety ovy No. 3, 2021). Lohahevitra lehibe ao amin'ny magazina vaovao: Fomba ahatanterahana ny vokatra ovy, ...
Ny gazety Potato System dia manome fiaraha-miasa
Manaporofo ny antontan'isa fa aleon'ny mpampiasa Internet maoderina miditra amin'ny tambajotra avy amin'ny finday avo lenta, ary maro ny olona mahita fa mety kokoa ny mampiasa «browser» ...
Navoaka ny nomerao farany amin'ny magazine "Potato System"
Ry mpamaky malala! Mampahatsiahy anao izahay fa ny orinasa mpamboly miompana amin'ny fambolena ovy dia afaka mandray maimaimpoana ny gazetinay. Raha te hisoratra anarana dia mila mameno kely ...
Ny nomerao faharoa amin'ny magazine "Potato System" dia eo am-panomanana ny famoahana azy
Hivoaka amin'ny 2 Jona 2021 ny nomerao amin'ny magazine ("Potato System" No. 2, 2021). Ity olana ity dia haparitaka amin'ny hetsika indostrialy lehibe indrindra ...
Raiso ny nomerao farany amin'ny magazine "Potato System" ao Ufa
Ny 23 martsa, ny fampirantiana manampahaizana manokana "AgroComplex" dia manomboka ao Ufa. Ny fampirantiana Agrocomplex dia tanterahina fanindroany. Ao anatin'izany ...
Maimaimpoana ny magazina Potato System!
Ao amin'ny 2021, manohy manolotra famandrihana maimaimpoana amin'ny magazine Potato System izahay, fa amin'ity indray mitoraka ity dia manasa anao hiditra amin'ny ...
P. 1 amin'ny 3 1 2 3 Manaraka
Ny teknolojia sy ny fototarazo vaovao dia hitombo hatrany amin'ny fototry ny vokatra avo sy ny voam-bokatra voalohany. Nisy fivoriana iraisampirenena natao tao Orel tao anatin'ny forum momba ny fambolena Shatilovo-2017. Voasary ho iray amin'ireo teboka mamaritra ny thesis ity hevitra ity
Ny "piramidan'ny fototarazo" dia manome fanoherana ny ovy amin'ny tara-pahazavana